Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » Ahịrị dị mkpa ga-emepe Nzukọ Njem Nleta Mba Nile na Jakarta
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya
Mgbakọ ndị isi ọgbakọ ndị njem ụwa niile
Global Tourism Forum (GTF) mepere ndị isi ọgbakọ Eshia n'ụtụtụ a na Jakarta ma na-akwado ahịrị dị mkpa nke ndị isi njem.
Ndị isi ọgbakọ Asia bụ ihe omume mba ụwa na njem na ile ọbịa.
Mgbakọ a na -ezube ịkwalite nyocha njem nlegharị anya nke ọma iji kesaa mmezu na mgbanwe echiche n'etiti gọọmentị na ụwa azụmaahịa.
Global Tourism Forum bụ atụmatụ nke ụlọ ọrụ World Tourism Forum nke dị na London.
Mgbakọ ndị isi Eshia ga-agba taa na echi, Septemba 15-16, 2021. Ọ bụ ikpo okwu mmekorita mba ofesi lekwasịrị anya n'idozi nsogbu maka ụlọ ọrụ njem. N'ịjikọ njikọ aka nke ụlọ ọrụ gọọmentị, ndị metụtara ụlọ ọrụ na agụmakwụkwọ, GTF na -agba mbọ inweta ụdị mmepe na -adigide maka ahịa njem na -apụta, yana ichepụta atụmatụ iji hụ na uto ndị njem.
Ọ bụ osote onye isi ala Indonesia, Ọkachamara Prof. Ma'ruf Amin, onye ji aka ya mepe nzụkọ na Raffles Hotel na Jakarta mgbe Dr. Sapta Nirwandar, Onye isi oche njem nlegharị anya nke Indonesia nabatara adreesị; Maazị Balut Bagci, onye isi oche nke ụlọ ọrụ ọgbakọ njem nlegharị anya ụwa; na Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, onye minista na -ahụ maka njem na akụnụba okike nke Republic of Indonesia.
Dọkịta Taleb Rifai, onye bụbu odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO ma bụrụkwa odeakwụkwọ ukwu nke World Tourism Forum Institute & Patron of the African Tourism Board kwukwara okwu n'ememe mmeghe.
Ọmarịcha ahịrị nke ndị na -ekwu okwu gụnyere osote onye isi ala Turkey, HE Fuat Oktay; HE Dato Dato Lim Jock Hoi, odeakwụkwọ ukwu nke ASEAN; HE Mr. Tony Blair, onye bụbu PM mba UK; Alain St.Ange, onye bụbu Mịnịsta maka njem nlegharị anya, ụgbọ elu ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri & mmiri nke Seychelles ma bụrụkwa onye isi oche ugbu a Ndị njem nlegharị anya nke Africa & Odeakwụkwọ ukwu nke FORSEAA, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ ama ama ama. Ndị otu ndị njem nlegharị anya nke ASEAN ga -enwe nnọkọ mkparịta ụka pụrụ iche.
Onye njem nlegharị anya nke 2021 nke Global Tourism Forum kpọrọ aha bụ Onye isi ala nke Republic of Indonesia.
Nzukọ njem njem ụwa niile na -arụkwa ọrụ dị mkpa n'ịdọta itinye ego itinye aka na mba ofesi kpọmkwem na mba ebum n'uche, site n'ịrụ ọrụ ịchọpụta ohere azụmaahịa, ịkwalite mmemme na inye nkwado nye ndị na -etinye ego na mba ofesi dị njikere ịkesa akụ na mba ebum n'uche.
Gịnị kpatara Indonesia?
Njem nlegharị anya na Indonesia bụ ihe atụ bụ isi nke esi eme ihe nke ọma. Akụkụ njem nlegharị anya bụ isi mmalite ego mba ofesi maka mba na akụkụ dị mkpa nke akụ na ụba.
Edepụtara Indonesia dị ka ebe nlegharị anya nke iri abụọ kacha mara mma n'ụwa niile na 20th na-agbasawanye ngwa ngwa n'ụwa niile na 9. Ọtụtụ ebe ndị ama ama n'ụwa nwere nnukwu mmụba na 2017, yana Denpasar, Jakarta, na Batam n'etiti ebe iri na-eto ngwa ngwa, na-enwe 2018, 32.7, na 29.2 pasent otu afọ karịa afọ. Ụlọ ọrụ ndị njem bụ nke anọ kacha ibu n'ihe gbasara ngwaahịa na ọrụ a na -ebupụ.
Nleta ndị ọbịa si mba ofesi na Indonesia mụbara site na 1.9% na 2019, site na nde 16.1 na 2018. Ihe dị ka nde ndị njem mba ofesi 9.73 bịara Indonesia na 2015, na -etinye nkezi abalị 7.5 na họtel ma nọrọ ụbọchị 7.5, maka ngụkọta ihe dị ka $ 1,142. N'otu afọ ahụ, ndị ọbịa si mba ofesi na Indonesia nọrọ ihe dị ka $ 152 kwa ụbọchị ma ọ bụ $ 152.22 kwa ụbọchị na nkezi. Otu n'ime isi mmalite njem nlegharị anya ise na Indonesia bụ Singapore, Malaysia, China, Australia, na Japan.
Edebere Indonesia na 40th na mkpokọta Njem Nleta Njem Nleta 2019 na akara njegharị asọmpi na njem nlegharị anya nke 4.3. Indonesia họọrọ 42nd n'ime mba 136 n'ọmụmụ ihe 2017 nwere akara 4.2. Dabere na ọmụmụ ahụ, ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Indonesia nwere ọkwa asọmpi asọmpi nke atọ n'ime mba 141.